နယူးယောက်တွင် ဖခင်က ၅နှစ်အရွယ်သမီးလေးကိုချီကာ ရထားလမ်းသို့ခုန်ချပြီး အဆုံးစီရင်မှုဖြစ်ပွား - Burmese Edition | Sunthit Myanmar
Burmese Edition | Sunthit Myanmar
Home News နယူးယောက်တွင် ဖခင်က ၅နှစ်အရွယ်သမီးလေးကိုချီကာ ရထားလမ်းသို့ခုန်ချပြီး အဆုံးစီရင်မှုဖြစ်ပွား
နယူးယောက်တွင် ဖခင်က ၅နှစ်အရွယ်သမီးလေးကိုချီကာ ရထားလမ်းသို့ခုန်ချပြီး အဆုံးစီရင်မှုဖြစ်ပွား
စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက် တနင်္လာနေ့နံနက်ပိုင်းမှာ နယူးယောက် Bronx မြို့ရှိ Kingsbridge ရထားဘူတာတွင် Fernando Balbuena လို့ခေါ်တဲ့ အသက် ၄၅နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ အသက် ၅နှစ်အရွယ်ရှိ သူ၏သမီး လေးကိုချီပြီး အမှတ် ၄ ရထားလာရာလမ်းထဲသို့ ခုန်ချကာအဆုံးစီရင်ခဲ့ပါတယ်။ ထူးဆန်းစွာဖြင့် ကလေးဟာမသေပဲ အ သက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူကတော့ ထိုနေရာမှာပဲ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
တနင်္လာနေ့ နက်နံ ၈နာရီလောက်မှာ Fernando Balbuena က သူမဆီကိုဖုန်းဆက်ပြီးနောက် ကြီးမားတဲ့ အရာ တစ်ခုခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာ သူမသိလိုက်ရတယ်လို့ မိခင်ဖြစ်သူ Niurka Caraballo က ပြောပြပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သူမ ဟာ ရထားဘူတာကို ချက်ချင်းသွားခဲ့ပေမယ့် အချိန်မမှီခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ သို့သော် ကလေးဟာ မသေဆုံးခဲ့ပဲ ပွန်းပဲ ဒဏ်ရာမျှသာရရှိခဲ့တဲ့အတွက် ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
မိခင်ဖြစ်သူ Niurka Caraballo က သူမရဲ့ အမျိုးသား Balbuena ဟာ သူမအပေါ်အလွန်ကောင်းတဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိသားစုကိုထောင့်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လူကောင်းတစ် ယောက်လည်းဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် သူ့မှာ စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ ဝေသနာတစ်ခုကို ခံစားနေရတာဖြစ်ပြီး သူမ အနေနဲ့လည်း ထိုဝေဒနာကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာ မသိခဲ့ဘူးလို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
New York တွင် ဖခင်က သူ၏ (၅)နှစ်အရွယ်သမီးလေးကိုချီကာ ရထားလမ်းသို့ခုန်ချပြီး အဆုံးစီရင်မှုဖြစ်ပွား
Previous articleအင်ဒိုနီးရှား ကောင်းကင်တစ်ခုလုံး အနီရောင်းလွှမ်းသည်အထိ မြူများကျခဲ့
Next articleBoston Dynamics ကုမ္ပဏီရဲ့ Spot စက်ရုပ်ကို လုပ်ငန်းခွင်တွင် တရားဝင်အသုံးပြုခွင့်ရပြီ
ဆိုင်ကလုန် Bulbul ကြောင့် ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် အာဏာပိုင်များက မြေနိမ့်ပိုင်းနေ ပြည်သူ တစ်သိန်း ကို ရွှေ့ပြောင်းထား
သုတ၊ရသတို့ ယူဆောင်ရာ မြန်မာတို့ရဲ့မီဒီယာ ဆန်းသစ်မြန်မာ
ကြမ်းပိုး အန္တရာယ် အတွက် ဆေးနည်းများ
NASA မှ ကပ်ပလာ ၉၀လို့အမည်ပေးထားတဲ့ ဂြိုလ်အသစ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိ
ကမၻာ့ ေစ်းအၾကီးဆံုး မိုဘိုင္းဖုန္း(၁၀)လံုးကို သင္သိပါသလား
© 2018. Sunthit Myanmar. All Right Reserved.